Kismaayo News » Marxaladihii dib u heshiisiinta Soomaaliya Dadaaladii Beesha Caalamka iyo weliba halka maanta wax marayaan Qeybtii 1. WQ Bishar Haji
Marxaladihii dib u heshiisiinta Soomaaliya Dadaaladii Beesha Caalamka iyo weliba halka maanta wax marayaan Qeybtii 1. WQ Bishar Haji
Salaan ka dib, Akhristow ku soo dhawow warbixin muhim ah, waxan si kooban u abaari doonaa haduu Alle idmo maraaxishii Soomaaliya soo maray iyo dadaaladii xal u halidda mashaqada Soomaaliya ee beesha caalamaka laga soo billaabo burburkii 1991 illaa laga soo gaaray maanta oo ay soomaliya yeelatay, dastuur iyo dowlad dhameystiran oo aan ku meel gaar aheyn. Faanoole feri kama qodna-Taas macnaheedu ma aha in loo baxay bash’bash iyo barwaaqo, dib ayan ka xusi doonaa sababta insha Allah,.
Janaayo 26, 1991, aya xukunka si qassab ah looga tuuray Alle ha u naxariistee Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, dagaal oogayaashii qabiillada aya ka faraxashay qarankii Soomaaliyeed, Dagaaloogayaashu waxay burburiyeen hantidii guud ee qaranka iyo middii gaarka loo lahaa, iyagoo taageera ka helaya Shacabka soomaaliyeed., Caasimaddii umadda Soomaaliyeed aya noqotay xero qabiil , waxaa lala wareegay guud ahaan hantidii qaranka iyo middi gaarka loo lahaa.
Kumannaan qaxooti soomaaliyeed ah aya magangalay dalalka deriska ah oo ay soomaalida u taqaanay “gaala-madow”.
Dadaaladii Beesha Caalamka ee ku wajahnaa soo celinta qarankii Soomaaliyeed,.
Bishii Juun 5shan bilood ka did markii la riday dawladdii dhexe ee Soomaaliya, madaxweynihii Jabuuti Xassan Guuleed Abtidoon aya casuumay dagaaloogayaashii Soomaaliya, isaga oo ka codsaday in xabadda la joojiyo laakiin wax natiijo ah lagama gaarin.
Luulyo 1991, Shir labaad ayaa lagu qabtay Jabuuti kaasoo kooxihii ka qayb galay ay madaxweyne ku meel gaar ah ugu doorteen Cali Mahdi Maxamed muddo 2laba sanadood ah, laakiin waxaa qaadacay dagaalooge Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid oo sheegay inuusan marna aqbali doonin madaxweyne aan isaga aheyn.
Janaayo 1993, Qaramada Midoobay aya qabanqaabisay shir ay isugu yimaadeen kooxihii dagaalamayay shirkaas oo ka dhacay Caasimada Ethiopiya ee Addis Ababa,si loo soo afjaro dagaalka sokeeye.
2laba bilood ka dib bishii maarso 1993, waxay aqbaleen ama saxiixeen in xabadda la joojiyo , balse dagaalkii sokeeye ayaa sii socday, heshiiskiina daakhadda ayu ka baxay.
Oktoobar 1996, Madaxweynii hore ee Kenya Daniel Arap Moi ayaa Nairobi ku casuumay 3saddexdii hoggaamiye kooxeed ee ugu dhibka badnaa Cali Mahdi Maxamed, Xusseen Caydiid iyo Cusmaan Caato, laakiin nasiib darro wax natiijo ah lagama gaarin.
Janaayo 1997, dowlada Ethiopiya ayaa kooxaha soomaalida ku casuumtay shir nabadeed ka dhacay Sodere-Ethiopiya. Wadahadalladii Sodere waxaa soo xaadiray 41 hoggaamiye qabiil oo matalayay 26 kooxood oo soomaali ah. isku deygaas waxuu socday ilaa Novembar 1997, Shirkii Sodere aya ku dhamaaday burbur, waxaa isla waqtigaa magaalada Qaahiro ee dalka Massar ka bilowday shir kale oo dib u heshiisiineed laakiin sidoo kale burburay.
Bishii Meey 2000-Augusto 2000, Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa marti geliyay Shirkii Carta, kaaso lagu dhisay dowlad dhexe oo Ku meel gaar ah, kooxihii soomaalida aya madaxweyne u doortay Cabdiqasim Salaad Xassan.
Oktoobar 2002-Oktoobar 2004, Urur goboleedka IGAD) ayaa maal galiyay Shirkii Dib-u-heshiisiinta Qaranka Soomaaliya ee ka dhacay Eldoret-Kenya. Waxa lagu heshiiyay in soomaaliyaa yeelato nidaam fedraal ah iyo dowlad ku meel gaar ah oo madaxweyne loogu doortay marxuum Cabdillahi Yusuf Ahmed (DFKM), taasoo bedeshay DQKM. DFKM waxa loo qorsheeyay inay Soomaaliya ka gudbiso xilliga kala-guurka ah ilaa iyo inta laga gaarayo bisha Agoosto 2009.
Janaayo 2007, Ururka Midowga Afrika ee Nabadda iyo Ammaanka ayaa sameeyay Howgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) oo ah ciidan nabad sugid oo markii hore loo qorsheeyay inay 6lix bilood ku taageeraan dadaallada dib u heshiisinta. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale ansixiyay howlgalka amisom Febraayo.
Sebteembar 2007, Hoggaamiyeyaasha ICU iyo qaybo mucaarad ah oo ka tirsan DFKM ayaa ku kulmay Asmara, Eriteria kuwaasoo curiyay Ururka Dib u xoreynta Soomaaliya (ARS).
Juunyo 2008: Dawladda ayaa Jabuuti kula saxiixatay heshiis saddex bilood ah oo xabad joojin ah ARS, balse hoggaamiyaha ARS Xassan Daahir Aweys aya diiday heshiiska, kaasoo horseeday inuu ururku dhexda ka kala jajabo.
31 Meey 2008- 9 Juun 2008, xibna ka socda DFKM iyo koox ka soo fallaagowday ARS ayaa ku kulmay Jabuuti kuwaasoo saxiixay heshiis nabadeed.
Janaayo 2009, barlamankii ku meel gaarga ahaa ee Soomaaliya aya Jabuuti ku doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyaga oo 2 sano ku kordhiyay waqtiga ku meelgaarka.
Febraayo 2011, Baarlamaanka Soomaaliya aya u codeeyay in 3saddex sano oo dheeraad ah loogu sii daro xilligii loo qorsheeyay Hay’adaha Federaalka ee Ku meelgaarka ah iyaga oo diidmo kala kulmay Beesha caalamka. Waxay taasi dhalisay xurguf ka dhex dhalatay afhayenka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo mid waliba uu dalbaday in xilligiisa oo kaliya la kordhiyo.
Juun 9, 2011,Waxa dhexdhexaadisay dowlada Uganda, Madaxweyne Sheekh Shariif iyo Afhayenka barlamanka Shariif Xassan Sheekh Aadan ayaa Kampala ku saxiixay Heshiisii la magac baxay “Kampala” oo hal sano loogu kordhiyay xilligoodii dhamaan waaxyaha federaalka ku meelgaarka ah. Heshiiska awgiis, DFKM waxaa laga doonayay inay sameeyaan dastuur federaal ah, doortaan madaxweyne kana saaraan Soomaaliya xaaladda ku meelgaadhnimo Agoosto 20-keeda 2012.
Sebteembar 6, 2011: Hoggaamiyeyaal Soomaaliyeed iyo kuwo caalami ah ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay Qorshaha Tubta Nabadda, iyo qorshayaal kaloo badan oo looga gol lahaa in dalka lagu gaarsiiyo dawlad rasmi ah.
Diseembar 24, 2011, Hogaamiyeyaal ka kala yimid daafaha dalka ayaa saxiixay Heshiiskii Garoowe, hashiiska aya ku saabsanaa qaabka ay noqoneyso dowladda rasmiga ah ee la naawilayo iyo weliba dowrka dumarka ee hayadaha dowliga ah.
Febraayo 18, 2012, Hogaamiyeyaal ka kala yimid daafaha dalka ayaa saxiixay Heshiiskii 2-aad ee Garoowe, Heshiiska aya qaabeeyay habka nidaamka federaalka rasmiga ah maadaama laga gudbayo ku meelgaar, nidaamka doorashooyinka iyo xulidda baarlamaanka, nidaamkan oo badalaya DFKM marka la gaaro bisha Agoosto 2012.
Maarso 26, 2012, Hogaamiyayaal soomaaliyeed ayaa ku shiray magaalada Gaalkacyo ee gobolka mudug, waxay isku raaceen in si dhab ah loo dhaqangeliyo qorshaha Tubta Nabadda iyo heshiisyadii hore si loo gabagabeeyo xilliga kalaguurka ah, iyaga oo xoojiyay heshiisyadii hore ee Garoowe kuna dheeraaday sharaxaada nidaamka dawlad goboleedyada Soomaaliya.
Meey 31-Juun 1, 2012, Hoggaamiyeyaal Soomaaliyeed iyo kuwo caalami ah ayaa ku kulmay Istanbul, iyagoo ugu baaqay beesha caalamka inay sii wadaan taageeradooda ku wajahan dib u dhiska dalka soomaaliya.
Juun 20-21, 2012, Waxuu shir rasmi ah oo 2laba maalmood socday dhexmaray DFKM iyo Somaliland oo lagu qabtay London, kaasoo dhaliyay wadahadalkii 1koobaad oo toos u dhex mara labada kooxood in ka badan 20 sano.
Meey 21-23, 2012, Kooxihii saxiixay Qorshaha Nabadda aya ku kulmay Addis Ababa kuna heshiiyay qorshooyin taxana ah oo looga gol lahaa daddargelinta dhisidda hay’adaha dowliga ah iyo in la dedejiyo sameynta dastuur cusub oo uu dalka yeesho.
Agoosto 1, 2012: Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa si buuxda u aqbalay in dalka loo sameeyo dastuur fedraal ah.
Agoosto 20, 2012, waxaa la dhaariyay barlamanka cusub ee dalka Soomaaliya taasoo tilmaan u noqotay dhamaadkii xilligii kalaguurka ee uu dalka soo maray.
Sebteembar 10-keedii, 2012,Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya aya madaxweyne u doortay Xassan Maxamuud culusow doorashadii ugu horaysay ee madaxtinimo oo lagu qabtay gudaha Soomaaliya in ka badan labaatan sano.
Aadanaha waxa ugu nasiib daran qofka la jecleysiiyo ceebaha dadka oo ceebihiisa laga qariyo, waa ibtilada haysato Soomaalida.Soomaalida waxa caado u ah xag’xagashada caalamka gaar ahaan dowladaha deriska ah,oo ay soomaalida inta badan u xambaariso mashaqada soomaaliya, lakiin taas waa mid xaqiiqada ka fog.Beesha caalamaka waxay soomaaliya u hurtay dhaqaale iyo waqti qaali ah, laakiin nasiibdarro soomaalida kama faaideysanin, mar walbana dhanka soomaalida ayuu balanfurka ka imanayay oo ka baxayay wixii lagu heshiiay.
Qeyta xigta waxan ku soo qaadan doonaa haduu Alle idmo,Marxaladda hadda la marayo